छाक टार्न अन्न नभए पछि गिट्ठा,भ्याकुर”मजदुर नेता कता छन भोट दिने मजदुरको यो हालत हुदा?:: Mero Desh
छाक टार्न अन्न नभए पछि गिट्ठा,भ्याकुर”मजदुर नेता कता छन भोट दिने मजदुरको यो हालत हुदा?
Published on: २७ जेष्ठ २०७८, बिहीबार ०९:०९
चितवन : ६० वर्षीय ‘कृष्णबहादुर चेपाङ निषेधाज्ञा का” कारण मजदुरी गर्न नपाएपछि बिहान गिट्ठा खोज्न जंगल तिर जान्छन्। बूढाबूढीको छाक गिट्ठाकै भरमा टरिरहेको छ। घरमा अन्न नहुँदा कालिका नगरपालिका–११ बन्दिपुरे टोलका चेपाङको दैनिकी गिट्ठा, भ्याकुर खोजेर बित्ने गरे को छ।”
‘घरमा चामल छैन, माग्न जाऊँ साहुले पत्याउँदैनन्’, उनी भन्छन्, ‘गिट्ठा, भ्याकुरले छाक टार्ने हो। यो पनि धेरै खाए जिब्रो बाक्लो हुन्छ। बाध्यताले खान परेको छ।’ यहाँका बासिन्दालाई हिजोआज गिट्ठाकै चिन्ता छ। काम गरेर कमाउन नपाएको र घरमा खानेकुरा सकिएकाले छाक
टार्न उनीहरूले गिट्ठा, भ्याकुर खोज्न दिनहुँ जंगल चहार्ने गरेका छन्। पैसो कमाउन सहरमा गएकाहरू अहिले घरमै बसेका छन्। काम गर्न जान नपाउँदा भोकै परिने डर पनि उनीहरुमा छ।”६ छोराछोरीसहित बसेका फुलकुमारी चेपाङ दम्पती यस्तै चिन्तामा रहेछ। ‘पाखो बारीमा जति
दुःख गरे पनि अन्न थोरै फल्छ। ६ महिनासम्म घरको खाने हो। त्यसपछि जंगल जाने हो’, फुलकुमारी भन्छिन्, ‘मकै सक्कियो, साहुले पत्याउँदैन अनि कसो गर्ने त ?’बन्दीपुरे टोलकै कुनराज चेपाङको बिहान–बेलुकाकै छाक गिट्ठा, भ्याकुर रहेछ। मजदुरी गरेर परिवार पाल्ने कुनराज अहिले
काम गर्न नपाएपछि जंगलमा गिट्ठाभ्याकुर खोज्न जान्छन्। घरमा एक वर्षको छोरा छ अर्को अलि ठूलो छ। बच्चाबच्ची लाई पनि त्यही खुवाउनुपर्छ। ‘घरमा अन्न छैन, गिट्ठाभ्याकुर खोज्दै खाने हो’, उनी भन्छन्,कमाउन जाउँ बाहिर निस्कन पाइँदैन, सँधैको छाक नै यही गिट्ठा हो।’
“फागुनदेखि अनिकाल व्यहोरेका उनीहरुले पाखोबारीमा लगाएको मकै भदौ नलागेसम्म भित्र्याउने बेला हुँदैन। मज दुरी नपाएका बेला पसलबाट सामानहरु पनि उधारोसमेत पाउँदैनन्। बालबालिका, बृद्धबृद्धाहरु र सुत्केरी झनै बढी समस्यामा छन्। वर्षेनी खाद्यान्न अभावको समस्या झेल्न
बाध्य चेपाङ समुदाय निषेधाज्ञाका कारण झन् प्रताडित बनेका छन्।चेपाङ अभियन्ता केपीकिरण शर्मा चेपाङ गाउँमा भोकमरी परेको बताउँछन्। ‘चेपाङ गाउँमा यो बेला सधैं भोकमरी लाग्छ। त्यसमा पनि बन्द भएपछि काम गर्न नपाउँदा आम्दानीको बाटो बन्द भएको छ’, शर्मा भन्छन्,
‘त्यसै त गरिबीले पिल्सिएकाहरु अहिलेको निषेधाज्ञाले झन् मारमा परेका छन्।’ सरकारले सूचीकृत गरेका ५९ आदिवासी जनजातिहरु मध्ये चेपाङहरु अति सीमान्तकृत समुदाय मा पर्छ। यो समुदाय गरिबीमा छ भने निषेधाज्ञा अवधिमा उनीहरुको दैनिकी अझै कष्टकर बनेको छ।
अहिले अधिकांश चेपाङको घरमा खाद्यान्नको चरम अभाव छ। यस अवधिमा केहीले राहत पाएका छन्। तर, त्यो पर्याप्त देखिँदैन।”(आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिक बाट ।)तस्बिर अन्नपूर्ण पोस्ट । यो पोष्टहरु सम्बन्धित ब्यक्ति निकाय सम्म पुर्याईदिनुस् ताकी केहि समधान होस।